di Davide Sabbatini - November 4, 2021
Enwere otu ihe anyị nwere ike ichefu nke dị ize ndụ karịa ichefu ebe anyị na-etinye mkpịsị ugodi ma ọ bụ icheta ịṅụ ọgwụ dị mkpa. Otu n’ime ihe kacha mkpa ichefu bụ onye anyị bụ n’ime Kraịst.
Site na mgbe a zoputara ma kwere na Kraist dika Onye-nzọputa ayi, ayi nwere njirimara ohuru. Baịbụl kwuru na anyị bụ “ihe e kere ọhụrụ” (2 Ndị Kọrịnt 5:17). Chineke na-ele anyị anya. E mewo ka anyị dị nsọ na ndị a na-apụghị ịta ụta site n’ọbara ịchụ-àjà nke Kraịst.
Foto site na Jonathan Dick, OSFS on Unsplash
Ọ bụghị naanị nke ahụ, anyị ji okwukwe bata n’ezinụlọ ọhụrụ. Anyị bụ ụmụ nke Nna na ndị nketa nke Kraịst. Anyị nwere uru nile nke ịbụ akụkụ nke ezi-na-ụlọ nke Chineke. anyị nwere ohere zuru oke na Nna anyị. Anyị nwere ike ịbịakwute Ya mgbe ọ bụla, ebe ọ bụla.
Nsogbu bụ na anyị nwere ike chefuo njirimara a. Ebe ọ bụ na onye nwere ihe mgbapụta, anyị nwere ike chefuo ụdị onye anyị bụ na ọnọdụ anyị n’Alaeze Chineke, nke nwere ike ime ka anyị ghara ịna-akpa ike n’ọgbakọ. Ichefu ndị anyị bụ n’ime Kraịst nwere ike ime ka anyị kwere ụgha nke ụwa wee duru anyị pụọ n’ụzọ ndụ dị warara. Mgbe anyị chefuru otú Nna anyị si hụ anyị n’anya, anyị na-achọ ịhụnanya adịgboroja na ihe ndị ga-anọchi anya ya. Mgbe anyị na-echetaghị nkuchi anyị n'ime ezi-na-ụlọ nke Chineke, anyị nwere ike ịkpagharị na ndụ dịka nwa mgbei furu efu, enweghị olileanya na naanị ya.
Nke a bụ eziokwu anọ anyị achọghị ma ọ bụ na-agaghị echefu:
N’ihi ọnwụ Kraịst n’ọnọdụ anyị, e mewo ka anyị na Chineke dị ná mma ma nwee ohere zuru ezu na nke zuru ezu n’ebe Nna anyị nọ: “N’ime ya ka anyị nwere mgbapụta site n’ọbara Ya, ngbaghara mmehie dị ka ụbara nke amara Ya si dị, 8 nke O mere. awụkwasiwo anyị nke ukwuu, na-enye anyị ụdị amamihe na ọgụgụ isi niile. (Ndị Efesọs 1:7-8)
Site n’aka Kraịst, e mewo anyị ka anyị zuo okè, Chineke na-ahụkwa anyị dị nsọ: “N’ihi na dị ka e mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie site ná nnupụisi nke otu onye, ​​otú ahụ ka a ga-eme ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị ezi omume site na nrubeisi nke otu onye.” (Ndị Rom 5:19)
Chineke hụrụ anyị n’anya ma were anyị dị ka ụmụ ya: “Ma mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye a mụrụ site n’aka nwaanyị, onye a mụrụ n’okpuru iwu, 5 ka ọ gbapụta ndị nọ n’okpuru iwu, ka e doo ụmụ ha. . 6 Ma na unu bụ ụmụntakịrị, ihe àmà ahụ bụ na Chineke ezitewo Mụọ nke Ọkpara ya n’ime obi anyị nke na-eti mkpu, sị: “Aba, Nna! 7 Ya mere i bughi orù ọzọ, kama i bu nwa-nwoke; ọ bụrụkwa na ị bụ nwa nwoke, ị bụkwa onye nketa site n’uche Chineke.” (Ndị Galetia 4:4-7)
Ọ dịghị ihe pụrụ ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke: “Amaara m na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n’ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n’ebe anyị nọ. ịhụnanya nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.” (Ndị Rom 8: 38-39).